Zvinomwe zveZvakanakisa & Rarest White Fluffy Imbwa - Inobereka
Kupuruzira kuburikidza nevezvenhau vezvenhau iwe unowanzo sangana nembwa dzinopenga idzo dzaunonyatsodanana nadzo.
Hazvishamise kuti, nekuda kweye teddy bear chitarisiko, izvi kazhinji chena imbwa dzinobereka anowanzo kuve akakwirira pane urwu runyorwa rwekutanga kuona!
Asi pane zvakawanda zvakawanda kune imbwa kupfuura kwavo chitarisiko. Muchinyorwa chino tichapfupisa dzimwe dzakanakisa imbwa chena dzakapfava; hunhu hwavo, mavambo avo uye izvo zvinotora kuvachengeta.
Pane huwandu hwezvinhu zvekufunga nezvazvo kare kuunza imbwa nyowani mumba mako , isu tinotarisira kukubatsira parwendo rwako.
7 White uye Fluffy Imbwa. Kutanga kumusoro kuruboshwe (Corgi-Husky Mix, Morkie, Shorkie, Sheepadoodle, Peekapoo, Malshi neCavachon).
1. Cavachon - Injere Yehungwaru uye Inonakidza
3. Shorkie - Shih Tzu Yorkie Sanganisa
4. Corgi-Husky Sanganisa - Iyo Yakacheka Chena Imbwa Inobereka Zvakamboita?
5. Peekapoo - Pekingese uye Poodle Sanganisa
6. Morkie - Maltese Yorkshire Terrier Sanganisa
7. Sheadadoodle - Iyo Huru Yakakura Fluffy White Imbwa Yevose
Ndeapi Imbwa Dzakanaka Ndidzo Dzakanakisa?
Yakarongwa sedzinza rekutambisa, iyi inonakidza bhora yefluff ndiyo yakakwana lap imbwa yakamira isina anopfuura gumi nematanhatu 'pakureba uye inorema mune isingasvike 20lbs pakurema.
Kubva muna 1996, muchinjikwa unoyevedza pakati peCavalier King Charles Spaniel neBichon Frize iri kuwedzera mukurumbira.
Kazhinji chena neruvara, nekuda kwevabereki vavo veBichon, iyi chena imbwa dzinza dzinodiwa nekuda kwemeso ayo anodakadza brown. Kutenda kumubereki weCavvy, maCavachoni mazhinji aripo neine runyoro, jasi rewavy.
Iyo Cavachon yakagara nhaka huchenjeri kubva kumubereki wayo weBichon uye runako kubva kumubereki weCavvy.
Kana ichifambidzana kubva pazera diki, iyi mellow pooch inosanganiswa nevanhu nemhuka zvakafanana. Inochinjika muchimiro, uyu akangwara shamwari anokodzera kumhuri zhinji uye nekuda kweiyo diki saizi inoenderana zvakanaka nefurati neguta kugara.
Yakaderera pane zvekurovedza muviri zvinodikanwa, 30 maminetsi ekufamba anozvikodzera iwo akanaka. Asi, nekuda kwehungwaru hwavo hwepamusoro ivo vanosarudzika kune mimwe mitambo yehuropi uye kumwe kukurudzira kwepfungwa. Izvi zvinoreva zvakare kuti ivo ihope dzekudzidzisa. Iyo Cavachon inopindura mushe kune yakasimbiswa yekusimbisa uye mubairo wakavakirwa kudzidziswa.
Brisk, inonakidza inofamba ine nguva shoma yaunoshandisa pakudzidzisa ichave nechokwadi chekuti iwe une zvemukati pup kuzvimonera pamakumbo ako pakupera kwezuva. Mushure mezvose, ndiyo nzvimbo iyo Cavachon inofara zvikuru.
Kutsvaga wekushamwaridzana naye ane chitarisiko kuti unyungudze moyo wako? Iyo Cavachon ndeyechokwadi mukwikwidzi.
Kazhinji inozivikanwa seMalshi , iyo Maltese Shih Tzu musanganiswa ndeye inodiwa fluffy dhizaina muchinjikwa mhando. Imwe mhando yekutambisa, iyo Malshi inowanzo kukura kusvika gumi nemaviri ”pakukwirira uye inogona kuyera chero pakati pe6-12lbs.
Inotaridza pom pom, iyo Malshi ine refu fluffy, chena jasi. Kunyangwe zvichikonzerwa nekuchengetedzwa kwepamusoro kwekushambidzika, varidzi vazhinji vanochengeta yavo Malshi yakapfupika.
VaMalshis havazivi kuti vachena; vachifara kutamba mumatope madhaka pese pavanowana mukana.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti sezvavanoyambuka neShih Tzu, veMalshi vanouya mune mamwe mavara asina kujairika mavara senge nhema, shava kana bi kana tri ruvara musanganiswa wezvese.
Kutanga mukutanga kwema1990 aya mabhora e fluff ainyanya kuberekwa kuve hypoallergenic. Zvatakapedzisira tave kushamwaridzana, shamwari ine rudo. Iyo Malshi inokodzera kumhuri zhinji, kushivirira vana, vakuru uye zvimwe zvipfuyo zvakafanana.
Kuuya mune yakaderera pane kumberi kwekurovedza muviri, kufamba kwemaminetsi makumi matatu kunovakwanira zvakanaka. Nechikonzero ichi, sutu yaMalshi uye guta rinogara zvakaenzana pamwe nekugara kumaruwa.
Kunyangwe paine tarisiro yekuberekesa mamwe mamiriro ehutano, tinoziva kuti Malshi anotambura nenyaya dzakafanana seyevabereki veMalta naShih Tzu vakaita seBrachycephalic Respiratory Syndrome, White Shaker Syndrome uye Patellar Luxation.
Iyi imbwa chena inopfaira inonyatsokodzera dzimba dzevakuru chete, iyo yakatendeka Shih Tzu Yorkie Sanganisa hunhu hukuru mumuviri mudiki.
Yakamira isina kureba kupfuura 11 'kureba, inorema pakati pe5 kusvika 12lbs, uyu muchinjikwa une simba wakarera imbwa chena iri kuwedzera mukurumbira.
Vazhinji vanoda Shorkie yavo yakapfava uye wavy hypoallergenic jasi ; kunyangwe sedzakawanda imbwa dzinopisa varidzi vadzo vanodzicheka ipfupi kuti dzigadziriswe. Kutenda kune mubereki Shih Tzu uye Yorkie, iyo Shorkie inouya mumhando dzakasiyana-siyana kusanganisira dema uye tan, shava uye chena, nhema uye chena, goridhe uye tsvuku.
Takataura nezvekuchinjika kwavo kune dzimba dzevakuru chete; izvi zvinonyanya kukonzerwa nehunhu hwavo hwesimba; kuve vasingashiviriri evana vasingafungidzirwe uye ivo vanonyatso kuziva stubborn steki.
Shorkie's haisi iyo imbwa iri nyore kudzidzisa, asi kusimbisa kwakanaka uye mubairo wakavakirwa pakudzidzisa kunokupa iwe mukana wakanyanya. Kungofanana naMalshi, maShorkies anozivikanwa ekuhukura - haavimbe nevasingazive zvichireva kuti imbwa dzakatarisa dzakakwana dzinovimbika kumhuri yavo.
Sezvazvakaita nezvizvarwa zvevabereki vavo, Shorkie inozivikanwa kuti inotambura nehutano hwakasiyana siyana kusanganisira portosystemic shunt, patella luxation uye yakajairwa mumhando diki, nyaya dzemazino uye bracycephalic airway syndrome.
Imwe imbwa inodziya, ndiyo yakati kurei Corgi Husky Mix. Kuyera munzvimbo dzakatenderedza 20lbs uye kumira kusvika ku13 ”pakukwirira, iyo Corgi-Husky yakagara ichirondedzerwa sembwa yakacheka kupfuura dzose.
Iyo Corgi-Husky Sanganisa mhedzisiro yekukwirisa Corgi, ingave Cardigan kana Pembroke Corgi neSiberian Husky.
Kugara nhaka yehungwaru kubva kumubereki wayo weCorgi uye munyoro asi akasimba kuda kubva kumubereki wayo weHusky, iyo Corgi-Husky musanganiswa wakashata wekusvinura uye kuseka.
Iwe unofunga nehungwaru hwavo vangave chiroto kudzidzisa zvakadaro, kazhinji kazhinji kupfuura iyo Corgi-Husky Mix ine yavo yega ajenda. Muitiro usingachinji pamwe nekusimbisa kwakanaka unokupa iwe mukana wakanyanya pakudzidziswa nekudyidzana.
Kutaura nezvekushamwaridzana, iyo Corgi-Husky Mix inogona kushivirira dzimwe mhuka dzinovaraidza zvakanaka kana ikakwidzwa navo; asi nekuda kwehunhu hwavo hwekusindimara ivo vanokodzera zvirinani kune vakuru chete dzimba kana dzimba dzine vana vakuru vane ruzivo rweakakura kupfuura ehupenyu hunhu.
Mhumhi yavo sechitarisiko kazhinji ndizvo zvinokwezva varidzi vazhinji; inowanzo rondedzerwa se squatter husky isingambokure.
Pamwe pamwe nechitarisiko chehusky, ivo vakachengetedza mamiriro ekuparadzanisa kunetseka - huskies anoshandiswa kushanda muzvikwata; iwe uri nhengo yechikwata ichocho. Ivo havashiviriri kusara vega uye vanowanzo chema iwe usipo. Haisi iyo yakanaka nzira yekuramba uchitaura mazwi nemuvakidzani wako!
Kutanga kushamwaridzana uye kudzidziswa kusingagumi kunokupa iwe yakanakira pfuti pakusimudza poo yakatenderera; ipa iyo Corgi-Husky nguva yako uye moyo murefu uye ivo vanokupa kuvimbika kwavo uye hunhu hwausingazombove neyakagomarara nguva.
Imbwa inoyerera yakafanana neteddy bere, iyo Peekapoo inouya nemhando dzakasiyana-siyana dzinosanganisira sirivheri, grey, chena, apurikoti, kirimu, nhema uye chokoreti.
Kuva mumwe wemirefu kumira dhizaina chena imbwa dzinobereka, iyo Peekapoo mhedzisiro yekusanganisa iyo Pekingese ine toyi kana diki poodle.
Imwe yakakodzerwa nedzimba dzevakuru chete, iyo Peekapoo yakagara nhaka maitiro ayo ekuchengetedza kubva kumubereki wayo wePekingese uye nehungwaru kubva kumubereki akashata.
Inotya zvakanyanya nezvevasingazive, zvichikonzera kuhukura kazhinji.
Iyo Peekapoo inogona zvakare kunge iri kure nevanhu vanozivikanwa kumhuri.
Kana iwe uri chikamu chemhuri yePeekapoos, uchave uine shamwari inotyisa isingade chero chinhu kunze kwekuumbundikira pamakumbo ako. Chete mushure mekunge iwe wabuda kunzira yako yezuva nezuva kunyangwe - Peekapoos akanyanya kukwirira musimba, achifara aine maminetsi makumi matanhatu ekurovedza muviri pazuva. Ivo zvirokwazvo ndeyekuchengetedza iwe pazvigunwe zvako.
Ivo vane yepakati kusvika refu bhachi kana ikasiiwa kuti ikure, asi vazhinji varidzi vane yavo Peekapoo inogara ichichekwa kuti vachengetedze yavo yakapfava, isina bhachi yakaderera kudzora.
Hunhu hwavo hwekusindimara hunoreva kuti kurovedzwa kunogona kunetsa, kunyanya kupaza dzimba.
Imwe feisty chena imbwa dzinza ndeye Maltese Yorkshire Terrier Mix. Yakamira kusvika gumi ”pakureba uye inorema isingasvike gumi nemaviri, ino pooch diki inozvirumbidza hunhu hukuru.
Kutanga kuma1990, iyo Morkie yakave yakakurumbira lap imbwa, inodiwa rudo rwayo uye chivimbo .
Iye Morkie hapana chaanoda kunze kwekuzvimbirira pasofa pakupera kwezuva; pamwe nekuti vaneta kubva mukuhukura kwese kwavakaita mukati mezuva iro. Ivo vanofarira kuhukura - mupositi, anotevera musuo achidzokera kumba kana kunyangwe nekuti hauna kuvapa kutarisisa kuzhinji sezvavaitarisira. Ivo zvakare vane chirwere chekuparadzaniswa kunetseka, saka nguva inopedzwa yega inofanira kuchengetwa padiki.
Anoshamwaridzana uye ane hushamwari, kana akaunzwa kubva pazera diki, iyo Morkie inowanzo garisana nemunhu wese, vanhu nemhuka zvakafanana.
Akangwara asi akasindimara, kurovedza kunogona kunetsa; kuchengeta zvikamu zvipfupi uye zvakanaka zvinokupa iwe mukana wakanyanya.
Kunyangwe parefu hurefu hwehupenyu hunosvika pamakore gumi nemashanu, tinoziva kuti Morkie anogona kutambura zvimwe zvezvinetso zvakafanana zvehutano zvinoitwa nevabereki vake panguva ino, zvinosanganisira: kudonha kwetracheal, cataract uye glaucoma. Ivo vanowanzo reverser sneezers.
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, isu tinopedzisa runyorwa rwedu rweimbwa dzinopisa nehukuru hwadzo dzose. Iyo Sheepadoodle, inorema inosvika 75lbs uye yakamira kusvika 22 ”pakukwirira, aya mahombe fluff mabhora ane simba, anodzidziswa uye ane hushamwari kwazvo.
Iyo yakakwana yekuwedzera kune chero mhuri, iyo Sheepadoodle mhedzisiro yekuyambuka Old English Sheepdog ine Standard Poodle.
Kubatanidza hunyoro hunhu hweOES nesimba rePoodle, iyo Sheepadoodle inoto nyorova, inotamba nhengo yemhuri.
Kunamatwa kwe teddy bere ravo rinotaridzika , Sheepadoodles anouya akareba mudenga pane chinodikanwa chekushambidzika. Kugara uchikwesha pooch iyi inofanirwa kana iwe uchida kuti bhachi ravo riyerere uye matt mahara. Vazhinji varidzi clip yavo Sheepadoodle kuti vabatsire zvishoma nekuchengetedza kwavo.
Kuzivikanwa kwavo kuri muchikamu kune yavo hypoallergenic jasi - asi sezvatakambotaura, hapana imbwa iri zvechokwadi hypoallergenic.
Jasi ravo richiri kucheka, asi nekuda kwemakara akagarwa nhaka kubva kumubereki wavo ane poodle, iyo dander yakavharirwa mumakora asinganyatso kuoneka.
Makwai emakwai anowanikwa zvakanyanya muvara chena uye chena, asi zvakare zvinokwanisika kuwana mwana mutsvuku uye chena kana ese akasimba mavara zvakare.
Kugara nhaka yehungwaru hwavo kubva kumubereki asina hunhu uye yavo yakapfava, yakapusa kuenda zvisikwa kubva kuOld English Sheepdog, iyo Sheepadoodle chiroto kudzidzisa.
Wese munhu mumhuri anogona kutora chikamu; kusanganisira vana.
Mune zvese kutendeseka, kubatanidzwa kwevana chinhu chinodiwa sezvo uchizoshandisa yakawanda nguva uchifamba uye uchidzidzira vakomana vane simba ava.
Saka ipapo tinayo, 7 yeakanakisa imbwa dzinopisa!
Kutangira kubva kune anotamba, kunyangwe akatsiga akakura gwaiadodle kune diki asi rinotyisa Shorkie.
Kutsvaga shamwari murume mukuru pamba chete, iyo Shorkie kana Peekapoo vakakwana. Musanganiswa weCorgi-Husky unokodzerawo zviri nani imba yevakuru, kunze kwekunge vana vakura uye vane ruzivo rwakakura kupfuura imbwa dzehupenyu.
Tichifunga nezvekuwedzera kumhuri, iyo Cavachon, Malteze Shih Tzu Mix, Morkie kana Sheepadoodle vanokwikwidza vakasimba.
Dzakawanda imbwa dzinodziya dzinodiwa nechitarisiko chavo, ingo funga kana hunhu hwavo chiri chinhu chawakagadzirirawo iwe! Regai tizive zvaunofunga nezvembwa dzinopisa dziri pazasi.
Iyo Patterdale Terrier inonakidza kana inonetsa chipfuwo kuva nacho?
Iyo Yakakura Alaskan Husky: Izvo Zvaunofanirwa Kuziva
mazita echiIrish embwa hadzi
imbwanana ine mwedzi mitatu yakarara sei
kukura kwakaita chihuahua terriers
kukura kwakaita matoyi maltese kuwana
mufudzi weAustralia husky lab musanganiswa